Tra-boinan’ny rivo-doza Chedza eto Boeny: 3818 kilao no anjara fanampiana Téléthon ho azy ireo | Région Boeny
Tra-boinan’ny rivo-doza Chedza eto Boeny: 3818 kilao no anjara fanampiana Téléthon ho azy ireo
26 février 2015 A La Une, Actualité
Taorian’ny tolo-tanana nataon’ny Vahoaka Malagasy manerana ny Nosy ho an’ireo tra-boina sy ireo tratran’ny Kere any Atsimo ny Sabotsy 07 Febroary 2015 teo, dia nahazo ny anjarany ny Faritra Boeny ka ny Alakamisy 19 Febroary teo no tonga teto Mahajanga izany.
Nanolotra izany taty an-toerana tamin’ny anaran’ny Fanjakana foibe ny solo-tenan’ny BNGRC Atoa RASOLOARINJAKA Haja, sy ny solotenan’ny Primatiora sady Filohan’ny Komitin’ny Fanaraha-maso ny Fitsinjarana ny Fanampiana ho an’ny Tra-boina, ny Kolonely RAKOTONDRABARY Eric. Marihina moa fa io Komity io dia voatendry araka ny naoty navoakan’ny Praiministra.
Vary 60 Gony, Voamaina 07 Gony, Siramamy 02 Gony, Savony 100 Baoritra, Menaka 47 Litatra, Fripperie 05 Gony ary Odi-moka 05 Baoritra mitotaly 3818 kilao no anjara fanampiana ho an’ireo Tra-boina. Nandray izany teo amin’ny Seranan-tsambon’i Mahajanga ny Lehiben’ny Distrikan’i Mahajanga II, Atoa FIDIMIAFY Jean Marc izay nisolo-tena ny Lehiben’ny faritra Boeny, notronin’ny Teknisiana BNGRC Faritra, Atoa RAMAHATAFANDRY Tahiana.
Tsiahivina fa Distrika roa no nisy Tra-boina maro sy tena voa mafy teto Boeny dia ny tao Ambato Boeny sy Mahajanga II, ao amin’ny Kaomina Mahajamba. Ny Zoma 20 febroary 2015 ihany dia efa samy tonga tany an-toerana ireo fanampiana. Entana milanja 1305 kilao no anjaran’iray voalohany ary 2 513 kilao ny an’ny faharoa.
Ho an’i Mahajamba, dia ny sambon’ny orin’asa Aqualma no nitatitra izany tany an-toerana ary ny Lefitry ny Ben’ny tanàna sy Filoham-pokontany vitsivitsy no nandray ny entana tamin’ny fomba ofisialy. Hentitra ny Komitin’ny Fanaraha-maso ny Fitsinjarana ny Fanampiana nanamafy fa “zaraina amin’ireo olona tena tra-paha-sahiranana irery ihany ary tsy atao takalo politika ny fanampiana”. Izany no nambarany dia noho ny trangana kolikoly sy fanararaotana politika niseho tany an-toerana nandritra ny fizarana ireo fanampiana vonjy rano vaky nalefan’ny Lehiben’ny Faritra Boeny sy ny BNGRC foibe tapa-bolana lasa izay, ka nampitaraina mafy ireo Tra-boina sasany tany an-toerana tamina gazety mpiseho isan’andro iray.
“Tsy maintsy ny Komisiona izay natsangana isaky ny Distrika irery ihany no hizara ireo fanampiana manomboka eto ary hisy ny fanaraha-maso akaiky amin’izany” hoy kosa ny Lehiben’ny Distrikan’Ambato Boeny, Atoa RAZAFINDRAVOKA Arsène teo am-pandraisana ny anjaran’ireo Tra-boina ny an-toerana tao Andranofasika.